६ वटै महानगरपालिकामा मतगणना शुरु हुँदै – Nepal Views
१४ जेठ २०७९
६ वटै महानगरपालिकामा मतगणना शुरु हुँदै
काठमाडौं। ६ वटै महानगरपालिकाको मतगणना शुरु हुँदैछ। काठमाडौं महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना शुरु गरिँदै छ। मतगणनाका लागि गएराति सर्वदलीय बैठकले सहमति जुटाइसकेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसकी सिर्जना सिंह, नेकपा एमालेबाट केशव स्थापित र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह प्रतिस्पर्धामा छन्।
यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा केही बेरपछि सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको समय निर्धारण हुनेछ। जहाँ मेयर पदका लागि पाँच दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रबाट बाबुराज बज्राचार्य प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। त्यसैगरी, एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मन्जली शाक्य प्रतिस्पर्धी हुन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि आज बिहान मतगणना सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। भरतपुरको मेयरमा मुख्यतः गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदीबीच प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ।
कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा पनि बिहानदेखि मतगणना थाल्ने निर्णय भएको छ। जहाँ मेयर पदमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र नेकपा एमालेबाट कृष्णबहादुर थापा प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।
यस्तै पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा पनि आज बिहानदेखि नै मतगणनाको तयारी छ। वीरगन्जमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह र नेकपा एमालेबाट विजयकुमार सरावगी मेयरका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। त्यसैगरी, उपमेयरमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट इम्तियाज आलम र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषतमलाल झा मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्।
३१ वैशाख २०७९ ९:०२
निर्वाचन आयोगको कामबारे टिप्पणी गरेपछि पोखराका मेयरलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण (पत्रसहित)
आईपीएल क्रिकेट : राजस्थान फाइनलमा, गुजरातसँग उपाधि भिडन्त
फाइनल प्रवेशका लागि अहमदावादमा भिड्दै बेंग्लोर र राजस्थान
बाजुराको बुढीगंगामा फेरि चुनाव गर्ने निर्णयको चर्को विरोध
एमाले पराजयको कारण धाँधली कि अन्तर्घात ?
बुद्धको जहाजले छाडेको लोकशरी १८ घण्टाको एम्बुलेन्स यात्रापछि काठमाडौंमा, उपचार शुरु
अस्पतालले होशमा ल्याएको बिरामी बिल सुनेपछि फेरि बेहोश हुन्छ : लिङ्देन (भिडिओ)
संसदमा राजेन्द्र लिङ्देनले उठाए अस्पतालको बिलदेखि खाडी पलायनसम्मका विषय
१२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्ध खोप असार १५ मा
केपी ओलीलाई ‘बा’ भनेपछि बादलमाथि प्रचण्डले गाली वर्षाए
बुद्ध एयरको ‘अमानवीय हर्कत’ : जलेकी महिलालाई ५ घण्टा कुरायो, तर जहाजमा लैजान मानेन
दर्शकले नपत्याएपछि आएनन् सलमान खान
झाँक्री भन्छिन्- बालेनको भोट जनमत होइन, ‘नो भोट’ हो
सबै सम्पत्ति त्यागेर वृन्दावन जाने वाचा गरेका प्रसाईं भन्छन् : म किन जानु?
प्रचण्डले फेसबुकबाट हटाए बादललाई गरेको गाली
छात्रालाई ‘सेक्स पार्टनर’ बन्न प्रस्ताव गर्ने शिक्षकलाई कलेजले बचाएपछि विद्यार्थीले घेरे प्रहरी चौकी
बिहे गर्दा चिनियाँ केटीहरुको कुटाइ खाइयो
केदारनाथ तीर्थयात्रामा गएका ३८ जनाको मृत्यु
बगलामुखी मन्दिरबाट चाँदीको मुकुट चोरी
ट्याम्के : जसराज किराती र यम बास्तोलाका कविता
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एकहजार ७१२ विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
संसद् बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
म पहिलो ‘ड्राफ्ट’ को गीतकार हुँ
सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन १६ जेठदेखि